Lucas Cheadle, PhD, Kaaliyaha Professor, Sheybaarka Hargabka Gu'ga, Cold Harbor Harbor, NY
Daah-furka Astaamaha Molecular ee Waxqabadka Microglial ee Maskaxda La Kiciyey
Daraasaddiisa, Dr. Cheadle wuxuu baranayaa horumarinta isku xirnaanta neerfaha ee muuqaalka ah iyadoo la adeegsanayo qaab jiir ah oo jiirka qaarkood lagu koriyo jawi aan iftiin lahayn inta lagu jiro marxaladda muhiimka ah ee horumarka. Daraasadiisii hore waxay muujineysaa in microglia asal ahaan ay "xoqdo" nidaamka muuqaalka, oo baabi'ineysa isku xirnaanta synaptic ee aan waxtar badan lahayn. Natiijo ahaan, amar bixinta jirka ee qeybtaas neerfaha waxay ku kala duwan tahay jiirka lagu koriyo mugdiga marka loo eego kuwa iftiinka ku koray. Shaqadiisa socota, Dr. Cheadle wuxuu raadin doonaa inuu cadeeyo heerka molikula sida microglia ay u kiciso arrimo dibadeed (sida nalka) iyo farsamooyinka ay markaa ku sawiraan isugeynta.
Cilmi-baaristu waxay bixisaa dhowr habab oo cusub, oo ay ku jiraan adeegsiga tikniyoolajiyadda hiddo-u-habeynta si loo baabi'iyo hiddo-wadeyaal gaar ah oo loo yaqaan 'microglial genes' si loo qeexo kaalintooda horumarinta wareegga muuqaalka, iyo sidoo kale abuurista khad jiir ah oo jiir ah oo calaamadeeya unugyada firfircoon ee firfircoon ee maskaxda, labadaba xeeladaha badanaa lagu dabaqo neur-mareenada uu Dr. Cheadle la qabsanayo barashada microglia markii ugu horeysay.
Josie Clowney, PhD, Kaaliyaha Professor, Jaamacadda Michigan, Waaxda Molecular, Cellular iyo Development Biology, Ann Arbor, MI
Naqshadeynta Dumarka ee Midho La'aanta: Labnimada oo lagu xakameynayo barnaamijyada neerfaha haweenka
Daraasad fara badan oo ku saabsan farqiga u dhexeeya maskaxda ragga iyo dumarka ayaa dhaqan ahaan, sida waxqabadka caadooyinka isu galmoodka, laakiin wax yar ayaa laga fahmay sida hiddo-wadayaasha dhaqaajinaya cibaadooyinkaas ay maskaxda ugu jiraan. Dr. Clowney wuxuu qiyaasayaa in howshu ay tahay mid laga jaro. Daraasaddeeda ilaa maanta iyadoo adeegsaneysa qaabka duulista miraha waxay soo jeedineysaa in maskaxda labku ay ka dhalan karto ka saarida barnaamijyada neerfaha “qaabka aasaasiga ah” ee aadka ugu dhow maskaxda dumarka, halkii laga abuuri lahaa barnaamijyo cusub.
Furaha geedi socodka waa cunsur transcript cunsur loo yaqaan "Fruitless," borotiin lagu abuuray kaliya maskaxda duqsiga miro labka. Cilmi-baaristeeda, Dr. Clowney waxay sameyn doontaa tijaabooyin iyadoo la adeegsanayo farsamooyin kala duwan si loogu fiirsado faa iidada ama luminta wareegyada iyo dabeecadaha la xiriira galmada ee xayawaanka leh ama aan lahayn Midhaha.
Shaul Druckmann, PhD, Kaaliyaha Professor ee Neurobiology iyo cilmu-nafsiga iyo cilmiga dhaqanka, Jaamacadda Stanford, Stanford, CA
Sidee Maskaxda u xisaabtanta iyadoo la adeegsanayo Firfircoonida Dadweynaha iyo Meelaha Maskaxda?
Ka dib tobanaan sano oo cilmi baaris ah, wali waxaan haysanaa faham xaddidan oo ku saabsan sida maskaxdu u sameyso xisaabinta gobollada oo dhan. Su'aashan aasaasiga ah waxay udub dhexaad u tahay shaqada Dr. Druckmann, taas oo ka faa'iideysaneysa baaxadda sii kordheysa iyo faahfaahinta duubista waxqabadka maskaxda si loo baaro waxa ka dhacaya maskaxda inta u dhexeysa kicinta iyo jawaab celinta, gaar ahaan marka jawaabta ay dib u dhacdo iyo xusuusta muddada-gaaban ku hawlan yahay.
Xogta hordhaca ah waxay muujineysaa in wax qabadku uu jiro oo uu isbadalayo dhamaan gobolada iyo dadyoowga neerfaha kaladuwan ee xaaladahan, Druckmann wuxuu ujeedkiisu yahay inuu muujiyo in howlahan wadajirka ah uu dhexgalayo guud ahaan aagagga maskaxda iyo qaababka isdhexgalka uu "u hagaajin karo" xusuusta lagama maarmaanka ah iyo ujeedka dhaqdhaqaaqa, xitaa haddii hal gobol ama waxqabadka dadweynuhu khaldami karo. Ujeedada dheeraadka ah ee mashruucu waa in la ballaariyo habka ay cilmi-baarayaashu u shaqeeyaan; Mashruuciisu wuxuu ku lug leeyahay wadashaqeyn xoog leh dhowr cilmi baarayaal kale, wuxuuna rajeynayaa inuu awood u yeesho inuu sahamin karo sayniska aasaasiga ah iyo sidoo kale inuu raadsado codsiyada bukaan socodka ee natiijadiisa.
Laura Lewis, PhD, Kaaliyaha Professor, Jaamacadda Boston, Waaxda Biomedical Engineering, Boston, MA
Sawirka Nuuralka iyo Dareenka dareeraha ee Maskaxda Hurdada
Dhaqdhaqaaqa neerfaha iyo dareeraha dareeraha dareeraha cerebrospinal fluid (CSF) labaduba waxay isbadalaan inta lagu guda jiro hurdada, cawaaqibyo kaladuwanna leh - nidaamyada dareenka ayaa ka weeciya ka warqabida kicinta dibada iyo dib u howlgelinta xusuusta, CSF-na waxay ku qulqulaysaa maskaxda waxayna tirtiraysaa borotiinada sunta ah ee soo kordha inta lagu jiro saacadaha soo jeedka Si xiiso leh, labada geeddi-socod ayaa si aad ah isugu xidhan. Daraasaddeeda, Dr. Lewis waxay baari doontaa xiriirka ka dhexeeya neerfaha iyo dareeraha dareeraha inta lagu jiro hurdada iyo isku xirka midkasta caafimaadka maskaxda.
Si taas loo sameeyo, Dr. Lewis wuxuu adeegsanayaa habab cusub si uu u ilaaliyo isku-darka, dhaqdhaqaaqa neerfaha saxda ah iyo socodka CSF. Cilmi-baaristeeda ayaa marka hore baari doonta sida mowjadahaan gaabiska ah looga dhex shaqeysiiyo maskaxda iyo shabakadaha neerfaha ee ku lugta leh, iyadoo la adeegsanayo kicinta maqalka ee sare u qaadi karta mowjadaha gaabiska ah. Marka labaad, waxay baari doontaa xiriirka ka dhexeeya hirarkan gaabiska ah iyo socodka CSF.
Ashok Litwin-Kumar, PhD, Kaaliyaha Professor, Waaxda Neuroscience iyo Machadka Zuckerman, Jaamacadda Columbia, New York, NY
Moodooyinka Ku-Xidhan Ku-Xaddidan ee Dabeecadda La-Qabsiga
Daraasaddiisa, Dr. Litwin-Kumar wuxuu ujeedkiisu yahay inuu horumariyo hanaan loo keeno adduunyada isku xirnaanta (jaantusyada jaantusyada ee habdhiska neerfaha) iyo moodellada habdhaqanka ee wadajirka ah iyadoo la horumarinayo habab lagu aqoonsado qaabdhismeedyada ku habboon ee ka mid ah isku xirnaanta xannibaadda moodooyinka habdhaqanka - tusaale ahaan, adoo xaddidaya moodellada si ay u isticmaalaan oo keliya isku xirnaanta 'synaptic' ee jir ahaan ku jira isku xirnaanta, halkii ay ka sameyn lahaayeen boodbood ahaanba aan macquul ahayn oo u dhexeeya neerfaha.
Si loo tijaabiyo loona sifeeyo qaabkan, Dr. Litwin-Kumar wuxuu marka hore diiradda saarayaa isku xirnaanta qayb ka mid ah maskaxda duqsiga maskaxda. Qeybtaan maskaxda ka mid ah, wax-soo-saarka dareenka waxaa lagu saadaalinayaa inay soo saaraan neerfaha, taas oo kicinaysa dabeecadaha sida soo-dhowaanshaha ama ka-hortagga fal-celinta. Kooxda ayaa raadin doonta inay si hufan u aqoonsato qaab dhismeedka isku xirka ka tarjumaya sida loo gudbinayo macluumaadka. Kadib waxay tijaabin doonaan moodooyinka waxbarasho ee qotada dheer oo ay xannibayaan isku xirnaantaas si ay u arkaan sida wax ku oolka ah ee ay u saadaalinayaan jawaabaha kicinta, marka la barbar dhigo moodooyinka aan xaddidnayn.
David Schneider, PhD, Kaaliyaha Professor, Jaamacadda New York, Xarunta Sayniska Cilmiga Neural, New York, NY
Isuduwaha Isbedelada ee Mouse Cortex
Shaqada Dr. Schneider waxay diirada saareysaa sida xakameynta mootada iyo gobolada dareenka ee maskaxda ay u wada shaqeeyaan qaabkan waxayna ka shaqeyn doonaan sidii loo soo bandhigi lahaa sida maskaxdu wax u baraneyso una sameysato xusuus aas aas u ah waxa laga filayo. Tijaabooyinkiisa, Dr. Schneider wuxuu diiradda saarayaa marin biyoodka isku xira gobolka xakamaynta mootada iyo gobolka dareenka maqalka. Markasta oo dhaqdhaqaaq la sameeyo, labada gobol waxay ku wada xiriiraan qaab u sheegaya nidaamka maqalka in la iska indho tiro dhawaaqa dhaqdhaqaaqaas abuuray.
Tijaabooyinkan ayaa gacan ka geysan doona in la garto doorka neerfayaasha gaarka ah ee saadaalinta jawaabaha dareenka, sida kontoroolka mootada iyo xarumaha dareenka ee maskaxdu ay ula falgalaan, iyo sida waddooyinka u dhexeeya mootooyinka iyo gobollada dareenka ay isu beddelaan markii dhawaq cusub uu noqdo “mid la filayo”. Cilmi-baaris dheeri ah ayaa xannibi doonta waddooyinka qaarkood ee maskaxda si loo go'aamiyo doorkooda samaynta saadaalinta, iyo sidoo kale eeg sida maskaxdu u isticmaasho fikradaha muuqaalka ah si ay uga caawiso saadaalinta dhawaaqyada is-soo-saarka ah.
Swathi Yadlapalli, PhD, Kaaliyaha Professor, Jaamacadda Caafimaadka ee Jaamacadda Michigan, Waaxda unugyada iyo bayoolojiga horumarka, Ann Arbor, MI
Farsamooyinka Gacanta ee Xakameeya Qawaaniinta Wareegga
Saacadaha wareegga dhiiggu waxay kexeeyaan qaar badan oo ka mid ah laxanka nidaamkeenna nafleyda, sida marka aan seexanno, soo toosno, sida aan dheef-shiid kiimikaadka u sameyno, iyo waxyaabo kale oo badan. Laakiin sida saxda ah waxa ka dhacaya gudaha unug kasta oo la siinayo si loo abuuro qaafiyaddaas si xun baa loo fahmay. Cilmi-baaristii hore ee bayoolaji iyo hidde-wadaha ayaa qeexday borotiinno muhiim ah oo ah arrimo isdaba-marin ah, ha ahaato mid wanaagsan ama ka-hortag ah, oo door ku leh wareegga wareegga. Dr. Yadlapalli wuxuu soo saaray habab casri ah oo lagu sameeyo hal unug, muujinta xallinta sare ee borotiinadan iyo sida ay ula falgalaan muddo 24 saacadood ah unugyada nool ee duqsiga miraha markii ugu horreysay. Hababkani waxay daaha ka rogeen doorka mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee soo gudbinta xannibaadda, oo loo yaqaan PER, oo isu soo uruurisa si ay u sameyso fociyo si siman loogu qaybiyay baqshadda unugyada unugyada, waxayna door ka ciyaareysaa wax ka beddelka goobta nukliyeerka ee hiddo-wadaha saacadaha inta lagu jiro wareegga.
Tijaabooyin isdaba-joog ah, Dr. Yadlapalli wuxuu go'aamin doonaa farsamooyinka ku lug leh geeddi-socodkan - sida fociyuhu u samaysan yahay iyo halka ay ka soo jeedaan, iyo sida ay kor ugu qaadaan cabudhinta hiddo-wadayaasha saacadda nidaamsan. Fahmitaanka wax badan oo ku saabsan ka shaqeynta nidaamyadan aasaasiga ah, ee awood u leh unugyada waxay siin doonaan bar bilow ah cilmi baaris ku saabsan hurdo badan iyo xanuunada dheef-shiid kiimikaadka iyo cudurada neerfaha.
Steven Flavell, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Machadka Piower ee Waxbarista iyo Xusuusta, Machadka Teknolojiyadda Massachusetts, Cambridge, MA
Qaab-dhismeedka Aasaasiga ah ee Qaabka Calaamadaha Gut-Brain Sign in C. elegans
Wax yar ayaa laga fahmay sida mindhicirka iyo maskaxdu si farsamo ahaan ula falgalaan. Baadhitaanka Dr. Flavell wuxuu ku dhismi doonaa daahfurka sheybaarka uu sameeyay barashada The C. xarrago dixirigoodu, kaasoo nidaamkiisa fudud oo si wanaagsan loo qeexay wuxuu dhalin karaa dabeecad aad u adag oo si fudud looga barto sheybaarka. Dr. Flavell iyo kooxdiisu waxay aqoonsadeen nooc gaar ah oo neuron (neurons dahaarka mindhicirka) oo kaliya firfircoon halka C. xarrago quudiyaan bakteeriyada. Tijaabooyinkiisa waxay cadeynayaan calaamadaha bakteeriyada ee dhaqdhaqaaqa neurons-ka, baari doona doorarka neuronsyada kale ee tilmaamida maskaxda, waxayna baari doonaan sida jawaab celinta maskaxda ay u saameyso ogaanshaha bakteeriyada qanjirka. Baadhitaankan ayaa furi kara khadad cusub oo baaritaan ah oo ku saabsan microbiome-ka aadanaha iyo sida uu u saameeyo caafimaadka aadanaha iyo cudur, oo ay ku jiraan cilladaha neerfa iyo maskaxda.
Nuo Li, Ph.D., Caawiye ku takhasusay cilmiga neerfaha, Baylor College of Medicine, Houston, TX
Xisaabinta Cerebellar inta lagu jiro Qorsheynta Gawaarida
Shaybaarka Dr. Li ayaa shaaca ka qaaday in kiliyaha dambe ee dambe (ALM, qayb gaar ah oo ka mid ah jiirka hore ee kilkilaha) iyo cerebellum ay ku xirnaadaan xarig halka jiirka uu qorsheynayo ficil. Weli lama oga illaa iyo hadda sida saxda ah ee macluumaadka loo gudbiyo iyo gadaal, laakiin way ka duwan tahay astaamaha dhabta ah ee murqaha murjiya. Haddii isku xirku carqaladeeyo xitaa isla markiiba inta lagu gudajiro qorshaha, dhaqdhaqaaqa si khalad ah ayaa loo sameyn doonaa.
Tijaabooyinka Dr. Li waxay daaha ka qaadi doonaan doorka cerebellum ee qorshaynta matoorka waxayna qeexi doonaan qaabdhismeedka jirka ee isku xiraya iyo ALM. Wuxuu khariidayn doonaa kiliyaha 'cerebellar cortex' wuxuuna ogaan doonaa tirada dadka nooc unug gaar ah loo adeegsaday xisaabinta cerebellar, oo loo yaqaan unugyada 'Purkinje', oo ay ku shaqeeyaan ALM xagga qorsheynta gawaarida, iyo waxa calaamadaha ay u diraan ama soo gudbaan inta ay qorsheynayaan. Ujeeddada labaad waxay sahmi doontaa nooca xisaabinta "cerebellum" ay ku hawlan tahay. Shaqadan, Dr. Li wuxuu waxbadan ka baran doonaa qaabdhismeedkaan maskaxda ee aasaasiga ah.
Lauren O'Connell, Ph.D., Kaaliyaha Professor of Biology, Jaamacadda Stanford, Stanford, CA
Aasaaska Neuronal ee Waxqabadka Waalidka ee Maskaxda Ilmaha
Shaqada Dr. O'Connell waxay gacan ka geysan doontaa in la garto sida xasuusta loogu sameeyo caruurnimada iyaga oo qayb ka ah habka isku xidhka, waxay raadindoontaa fikradaha xusuustaas si loo aqoonsado sida ay u saamaynayaan go'aan gaadhista mustaqbalka, waxayna sahamin doontaa saamaynta neerfayaasha ee carqaladaynta. Burucda O'Connell waxay baraneysaa, helitaanka cuntada iyo daryeelka waxay horseedaysaa tadpole inuu ku sawiro waalidka, taa oo saameyn ku leh doorashada tadpole ee lammaanaha mustaqbalka: waxay doorbideysaa lammaaneyaasha u muuqda kuwa daryeelaha ah.
O'Connell waxay tilmaamtay astaamaha neuronal-ka ee ku hodansan tadpoles kuwaasoo dalbanaya cunno u dhigma kuwa ku lug leh arrimo badan oo neerfaha ah oo la xiriira barashada iyo dhaqanka bulshada ee aadanaha. Daraasaddeeda ayaa sahamin doonta qaab dhismeedka neuronal ee ku lug leh aqoonsiga ilmaha iyo xiriirinta daryeelayaasha, iyo sidoo kale waxqabadka maskaxda marka la sameynayo xulashooyinka lamaanaha goor dambe nolosha, si loo arko sida waxqabadka neuronal ee geeddi-socod kasta uu ula xiriiro.
Zhaozhou Qiu, Ph.D., Caawiye ku takhasusay cilmiga jimicsiga iyo cilmiga neerfaha, Jaamacadda Johns Hopkins, Baltimore, MD
Soo Baadhista Aqoonsiga Molecular-ka iyo Waxqabadka Shabacadaha Novel Chloride ee Nidaamka Nerror
Baadhis badan oo ilaa maanta ah ayaa diiradda lagu saaray kanaalada ion kana fulinaya ion-yada si fiican loo xukumay, sida soodhiyam, potassium iyo kaalshiyam. Si kastaba ha noqotee, shaqada ee kanaalada ion kanaallo u oggolaanaya gudbinta chloride, oo ah kuwa ugu badan ee si xun u eedeeya, ayaa si liidata loo fahmay. Markii la sameynayay shaashadda unugyada sare ee unugyada jirka, Dr. Qiu iyo kooxdiisa cilmi baarista waxay aqoonsadeen laba qoys oo cusub oo ah kanaalada chloride, oo ay ku dheehan tahay kordhinta mugga unugyada iyo aashitada pH-ga, siday u kala horreeyaan. Daraasaddiisa ayaa looga golleeyahay in lagu baaro shaqada neerfaha ee wadooyinkan cusub ee ion-ka iyada oo diiradda la saarayo is-dhexgalka neuron-glia, caagga synaptik, iyo barashada iyo xusuusta. Dr. Qiu wuxuu ku fidin doonaa qaabkan kanaalada kale ee qarsoon ee maskaxda. Daraasaddiisa ayaa bixin doonta aragtiyo muhiim ah oo ku saabsan sida koloriin loogu habeeyo nidaamka dareemayaasha.
Maria Antonietta Tosches, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Jaamacadda Columbia, New York, NY
Isbeddellada Modulayaasha Gene iyo Moodooyinka wareega ee loogu tala galay Inhibition Cortical Inhibition
Maskaxda casriga ah waxaa qaabeeyey taariikh fog oo horumarineed. Dr. Tosches wuxuu sameynayaa daraasad si uu u fahmo geedi socodyadaan oo uu u ogaado waxa nidaamyada aasaasiga ah ee nabadeed ay ku keydsan tahay xayawaanka iskuxiran ee ay kala joogaan boqolaal milyan oo sano oo horumar ah.
Dr. Tosches wuxuu baarayaa taariikhda horumarineed ee neerfaha GABAergic. Tijaabooyinkeedii hore waxay heleen GABAergic neurons ee xamaaratada iyo xayawaanada ayaa hiddo ahaan la mid ah, taasoo muujineysa in noocyadan neuron-ka ah ay horay u jireen awoowayaasha laf-dhabarka; waxay sidoo kale wadaagaan cutubyo hidde oo la xiriira shaqooyinka neerfaha gaarka ah ee labada nooc ee maskaxda. Daraasadda cusub ee Tosches, waxay go'aamineysaa haddii noocyadan neurons-ka isku mid ah laga helo maskaxda fudud ee mushaaraadka. Shaqadani waxay soo bandhigi doontaa nooc xayawaan ah oo cusub oo loogu talagalay wareegga 'neuroscience', iyada oo lagu dari doono fahamkeena sida maskaxdu u shaqeyso heer aasaasi ah.
Daniel Wacker, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Iskuulka Caafimaadka Icahn ee ku yaal Mount Sinai, New York, NY
Dardargelinta Helitaanka Daawooyinka ee Cilladaha Maskaxda iyada oo loo marayo Daraasadaha Dhismaha ee Receptor-ka Serotonin
Dr. Wacker wuxuu soo jeedinayaa hab cusub oo sheeko ku saabsan daahfurka daroogada kaas oo diiradda saaraya qaabilaad gaar ah oo loo yaqaan 'Serotonin receptor' oo loo yaqaan 5-HT7R (oo aan lahayn halista la mid ah dhaqdhaqaaqa nidaamka dopamine-ka sida dawooyin badani u qabtaan), si taxaddar leh khariidadda qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka cabirka molikaligga, iyo raadinta xeryo ku xirmi doona soo-dhoweyntaas qaab gaar ah. Dr. Wacker wuxuu soo jeedinayaa in la sameeyo daraasad qaab dhismeedka soo-dhoweedka iyadoo la adeegsanayo qalabka raajada loo yaqaan 'X-ray crystallography' oo ku saabsan muunadaha la daahiriyey ee soo dhoweynta. Kooxda Wacker waxay markaa samayn doonaan baaris kombiyuutar ah oo ah boqolaal milyan oo xeryood, iyagoo isbarbar dhigaya qaab dhismeedkooda 3D iyo qaabka 3D ee soo dhoweeyaha kuwa ay u badan tahay inay “ku habboonaan karaan." Nidaamkan kumbuyuutareedku wuxuu siinayaa fursad aasaasiyan daawooyinka hore loogu baari karo iyadoo lagu saleynayo qaab dhismeedkooda, iyo in la dardar geliyo horumarkooda.
Jayeeta Basu, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Machadka Neuroscience, Jaamacadda New York University of Medicine, New York, NY
Isbeddelka Kala Duwanaanta Kortikal ee Hawlaha Hippocampal iyo Mabaadiida Mabaadiida
Dr. Basu wuxuu ujeedkiisu yahay inuu ku tuso wareegga qaybta ka dhexeysa LEC iyo neurosyada gaar ah. Dhiigkeedu wuxuu si toos ah u qori doonaa calaamadaha ay heleen dendrites khafiif ah ee qanjidhada marka LEC signals lagu diro ama aan lahayn calaamadaha MEC, iyo calaamadaha kala duwan ee signalka. Darajooyin kale oo tijaabo ah oo jiir qaba ayaa tijaabin doona aragtida ah in LEC-yadaasi ay taageerayaan abuurista xusuusta meel marka waxbarashada - calaamaduhu waxay dhalin karaan dabeecad si ay u raadsadaan abaal marino meelo kala duwan. Cilmi baadhayaashu waxay arki doonaan sida loo beddelo ama ka baxo LEC signageada inta lagu jiro barashada ama xilliga xasuus-qorka waxay saameyn ku yeelaneysaa firfircoonaanta unugyada goobta maskaxda iyo habdhaqanka barashada laftiisa. Cilmi-baaristaani waxay noqon kartaa mid ku habboon daraasadaha mustaqbalka ee cudurka Alzheimers, PTSD iyo xaalado kale oo xasuusta iyo macnaha "waxyaallaha" macquul ah.
Juan Du, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Barnaamijka Buuxinta Qaabdhismeedka, Xarunta Kansarka iyo Cilmi Biyoolajiyada, Machadka Cilmi Baarista Van Andel, Grand Rapids, MI
Nidaaminta nidaamyada xasaasiyeyaasha kulul ee nidaamka dareemayaasha
Dr. Du wuxuu qaban doonaa mashruuc saddex-qaybood ah si uu u furo qarsoodiga sida macluumaadka kulaylka loo helayo lana socodsiiyo nidaamka neuralada. Waxay fiirinaysaa seddex siyoodhiyood oo qaas ah, mid ka mid ah kaas oo ogaanaya heerkul qabow iyo qabow ka baxsan dibadda, mid ka mid ah kaas oo ogaanaya kuleyl aad u kulul, iyo mid ka soo baxa heerkulka diirran ee maskaxda (si loo xakameeyo heerkulka jidhka.) Waxay marka hore u aqoonsan doontaa xaaladaha nadiifinta ee kuwa soo dhaweeyaha waa la soo saari karaa waxaana loo isticmaali karaa tijaabooyinka shaybaadhka waxaana wali la shaqeyn karaa kuwa isku midka ah ee jidhka.
Ujeedada labaad waxay tahay in la arko dhismayaasha qaabdhismeedyada la qabadsiiyay waxaa lagu dhaqaajiyaa heerkulka iyo fahamka sida ay u shaqeeyaan. Tani waxay sidoo kale ku jiri doontaa hormarinta daaweyn cusub oo ku xiran dhismooyinkaas iyaga oo xakameynaya. Marka saddexaad, marka dhismayaasha la fahmayo, tijaabinta ansixinta ee soo-dhaweeyayaashu ay isku beddeleen inay isbeddelaan ama ka saaraan xasaasiyadda heerkulka ayaa la qaban doonaa, marka hore ee unugyada, ka dibna jiirarka, si loo arko sida wax u beddelidda aaladaha-xasaasiyadeed heerkulka saameynaya.
Mark Harnett, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Sayniska iyo Cognitive Sciences, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA
Qaabilidda Qaybinta Dendritic-ka ee Qiimaynta Kombiyuutarada Xilliga Kiriimka ah
Dr. Harnett wuxuu eegayaa dendrites nidaam muuqaal leh qalabka korontada iyo qalabka fudud, si loo qiyaaso sida calaamadaha u socdaan laanta dendrite, iyo qiyaasta sida wax u beddelidda dentiashadu isbeddesho sida uu u shaqeeyo neuronka. Hurgumooyinkani waxay u ogolaanayaan Dr. Harnett inuu tijaabiyo haddii calaamadaha la joojiyo ee laanta gaarka ah ee dendrite ay isbedeleyso sida shabakadda neuralada ay uga jawaabto dareemayaasha muuqaalka qaarkood. Barashada in hal neuron ah oo asal ahaan ka kooban yahay shabakad isku mid ah oo ka mid ah processor-yada yaryar ayaa beddeli doona fahamkayaga sida maskaxdu u xisaabtanto. Waxyaabaha kale, tani waxay saameyn kartaa sida sirdoonka caanaha ah, oo loogu talagalay shabakadaha neerfaha, kobcaya sanadaha soo socda.
Weizhe Hong, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Waaxyaha Heerka Noolojiga iyo Nuuryjiyada, Jaamacadda California, Los Angeles, CA
Nidaamyada Qalabka Nuuraliya ee Habdhaqanka Matuurnimada
Diirad gaar ah oo ka mid ah shaqada Dr. Hong ayaa baaraya doorka gobolka ee maskaxda lagu xakameeyey ee loo yaqaan 'amygdala' ee xakamaynta dhaqanka waalidnimada. Inkasta oo jiirarka haweenku badanaa ku lug yeeshaan dabeecadaha sii kobcinta ee ardayda, guud ahaan jiirarka ma muujiyaan dhaqanka waalidnimada illaa faracooda ay dhalaan.
Cilmi-baadhistu waxay aqoonsan doontaa dadka qaaska ah ee qeexan, oo dhexdhexaadiya dhaqanka waalidnimada. Cilmi-baaristu waxay sidoo kale isbarbardhigaysaa wareegyada neuraliska ee ragga iyo dumarka si ay u fahmaan sida dhaqdhaqaaqa neerfaha ee qanjidhada nuucaani ay u dhaqmaan hab-dhaqanka waalidnimada. Cilmi-baaristaani waxay ku siin doontaa fikrado muhiim ah oo ku salaysan asalka asalka habdhaqan bulsheed oo muhiim ah iyo mabaadi'da aasaasiga ah ee xukuma dabeecadaha xag jirka ah ee jinsiga.
Rachel Roberts-Galbraith, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Department of Biology Biology, Jaamacadda Georgia, Athens, GA
Dib-u-soo-nooleynta Nidaamka Dareemaha Dhexe ee Qorshayaasha
Iyadoo la baranayo dib-u-soo-ceshiga maskaxda ee adduunka dabiiciga ah, Dr. Roberts-Galbraith wuxuu rajeynayaa in uu barto faahfaahinta ku saabsan habka dib-u-dhiska midabada iyo doorka unugyada kala duwan. Ujeedada ayaa ah in la baaro haddii neurons ay ogaan karaan dhaawaca iyo dib-u-hagaajinta naftooda si ay u diraan calaamado muujinaya in ay kicinayaan isla markaana toosin lahaayeen. Dr. Roberts-Galbraith wuxuu cadeeyaa in xididada dareemayaasha ay saameyn ku yeeshaan unugyada maskaxda ee loo yaqaan 'planar stem cells', kuwaas oo loo qoro inay qaybo ka mid ah habka dhexe ee dareemayaasha (iyo qeybaha kale ee jirka). Xakamaynta wanaagsan ee unugyada stem waa mid muhiim u ah dib-u-soo-kabashada, maadaama ay qorsheeyayaashu si daacad ah u bedelaan unugyada maqan oo aan waligood horumarin burooyinka.
Ujeedada kale waa in la baaro doorka unugyada galmada, kuwaas oo caadiyan loo arko inay yihiin jeexjeexa nidaamka dareenka laakiin taasi si cad u leh doorarka muhiimka ah sida tan hore loo aqoonsan yahay. Unugyada glial waxay ka sameeyaan qayb ballaadhan oo ah xayawaanka 'dareenka' oo waa in dib loo soo celiyaa iyadoo lala socdo qanjidhada; waxay sidoo kale u badan tahay inay bedelaan dib-u-kicinta qanjidhada. Rajada cilmibaadhistaani waxay ku siin doontaa faham dheeraad ah sida dib-u-soo-kabashada ugu dhici karto kiisaska ugu guulaha badan, oo laga yaabo inay u sheegaan siyaabo cusub oo looga fekerayo dib-u-ceshiga neerfaha ee dadka.
Shigeki Watanabe, Ph.D., Kaaliyaha Professor of Biology Cell iyo Neuroscience, jaamacada Johns Hopkins, Baltimore, MD
Fahamka Mashruucyada Xuduudaha Lagu Beddelayo Dhacdooyinka
Dr. Watanabe wuxuu isticmaali doonaa farsamo la yiraahdo "flash-and-freeze microscopy" si loo baaro hannaankan. Nuuronka ayaa la kicin doonaa iftiin - fiilada - markaa habsocodka ayaa la joojin doonaa si buuxda oo cadaadis sarreeya waqti go'an waqtiyada saxda ah ee microseconds ka dib kacsanaan. Qalabka la qaboojiyey ayaa markaa la arki karaa iyada oo la isticmaalayo mikroskoobo. Iyadoo la qaadanayo sawirro taxane ah oo la qaboojiyey waqtiyada kala duwan ka dib wacyigelinta, Dr. Watanabe ayaa abuuri doona aragti tallaabo tallaabo tallaabo ah oo lagu ogaanayo borotiinka ku lug leh iyo waxa ay qabtaan. Ma aha oo kaliya tani waxay siinaysaa fahan wanaagsan oo ku saabsan sida uu u shaqeeyo nukliyadaha, waxa ay saameyn ku yeelaneysaa cudurada la xiriira gudbinta cillad xun, sida Cudurka Alzheimers.
Eiman Azim, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Shaybaarka Naasnuujiyaha Naasnuujiyeynta,
Machadka Salk ee Daraasaadka Bayoolojiga, La Jolla, CA
Xakameynta Spinal Circuits Xakamaynta Dhaqdhaqaaqa Dhibcaha ah
Dhaqdhaqaaqa adag ee gacmaheenna, gacmaheena iyo faraha ayaa aasaas u ah isdhexgalka maalinlaha ah ee adduunka, laakiin sayniska ayaa kaliya bilaabaya in uu xoqo dareenka fahamka sida xuubka neerfaha ee qaaska ah u xakameynayo saxda, xawaaraha iyo daacadnimada dabeecadahan kartida leh. Dr. Azim oo ah shaybaarka machadka Salk wuxuu ku yaalaa horudhaca arimahan, isaga oo dejinaya habab badan oo kala duwan oo loola jeedo in la naqshadeeyo kala duwanaanshaha maadooyinka, anatomical iyo hawlaha kala duwan ee wadooyinka mootooyinka hal mar. Ka faa'iideysiga horumarka dhawaan ee barashada mashiinka, teknoolajiyada aragtida kombuyuutarka iyo qalabka molecular-genetic, Azim Lab ayaa ujeedkiisu yahay in la horumariyo habab badan oo siman, oo aan si daacad ah lahayn, si sare loogu qaadayo si loo wada dhimo dhaqdhaqaaqa maskaxda ee dhaqdhaqaaqa - gaar ahaan dhaqdhaqaaqyo xirfad leh sida goolka la taaban karo iyo qabashada. Natiijooyinkoodu waxay caawin karayaan in la caddeeyo sida cudur ama dhaawac u gooyey fulinta dhaqdhaqaaqa caadiga ah ee dhaqdhaqaaqa, taas oo ka dhigaysa habka loogu talagalay ogaanshaha xanuunka iyo daaweynta.
Rudy Behnia, Ph.D., Kaaliyaha Professor of Neuroscience, Columbia University-Zuckerman Mind Behind Behavior Institute, New York, NY
Nuuromodulation-ku-dawlad-ku-tiirsanaanta Himilada Miisaanka
Dr. Behnia waxa uu barayaa hababka firfircoon ee loo hindisay aragtida, sahaminta habka muuqaalka ee maskaxda ee ku dhaqma dabeecadaha waxayna caawisaa xayawaanka iyo bini-aadanka inay ku noolaadaan oo ku raaxaystaan jawiyada adag ee lagu hayo dareenka dareenka. Iyadoo la adeegsanayo nidaamka moodada miro-hawleedka, shaybaadhka Behnia wuxuu baaraa sida xayawaanku u arkaan oo u waafajiyo habdhaqankooda bedelida jawi iyada oo loo marayo farsamooyin kala duwan, oo ay ka mid yihiin gudaheeda hal sawir oo kabaro ah oo isku-xiran, laba sawir-qaadasho-sawir, farsamoyaqaan iyo dabeecadaha habdhaqanka. Doodda gaarka ah ee Dr. Behnia ee shaqada laga maalgaliyo McKnight wuxuu raadin doonaa sida dawladaha gudaha ah sida dareenka wax ka baddelaya dareenka maskaxda ee dareenka qaarkood, cilmi baaris ah oo daadi kara iftiinka cusub ee doorka neuromodululatorka ee ciyaaraya beddelidda shaqada wareegyada neuralada. Cilmi baaristani waxay sidoo kale muujin kartaa bartilmaameedyo cusub oo loogu talagalay xeeladaha daaweynta ee xanuunada sida niyad jabka iyo ADHD.
Felice Dunn, Ph.D., Kaaliyaha Professor of Ophthalmology, University of California, San Francisco
Hirgalinta iyo Xeer-dejinta Aragga iyo Qalabka Cose
Cilmi-baadhistii Dr. Dunn waxa uu diiradda saarayaa sidii loo ogaan lahaa sida muuqaalka macluumaadka muuqaalkiisa loo xakameeyay oo laga baaraandego wareegga retina, aqoonta u furi karta jidadka cusub ee dib u soo celinta aragtida lumay. Inkasta oo cudurro badan oo retinal ah oo keena luminta aragga ama indho la'aantu ay ka bilaabmayso xumaynta fotoreceptors, sida cudurku u socdo inuu saameyn ku yeesho qanjirrada postsynaptic weli lama yaqaan. Dumarkeeda, Dunn waxay gashaa xayeysiinta transgenic ee wareega wareega ee fotoreceptors, duubista farsamada iyo sawiridda unugyada hal, iyo hababka gene-editing si ay u baaraan unugyada haray ee unugyada iyo synptses. Shaqadeeda waxay kaa caawin doontaa in la ogaado sida wareegga soo hadhay uu bedelo qaab-dhismeedkiisa iyo shaqadiisa ku-oolka ah ee xasaasiga ah, waxaana laga yaabaa in uu gacan ka geysto muujinta daaweynta suurtagalka ah ee la joojiyo ama looga hortago aragti la'aanta.
John Tuthill, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Physiology iyo Biophysics, Jaamacadda Washington, Seattle
Xakamaynta Macaamilka ee Meel-marinta Meel-marinta ee Drosophila
Mabaadi'da-dareenka jireed ee is-dhaqdhaqaaqa iyo isbeddelka-wuxuu muhiim u yahay, xakamaynta dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa, weli wax yar ayaa laga ogyahay sida ay u socoto wareegyada wareega ee maskaxda si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa mustaqbalka. Dr. Tuthill's labadaba wuxuu ka shaqeynayaa inuu furo nuxurka barashada mashiinka maskaxda adoo baaraya sida duurjoogta miraha lugta leh ay bartaan in ay ka hortagaan caqabadaha oo ay ku socdaan jawi aan la saadaalin Karin, oo qiimeynaya doorka dareemaha dareenka ee maareynta maareynta iyada oo si sahlan loo adeegsado dhaqdhaqaaqa. Fahamka qoto dheer ee ku saabsan xakameynta jawaab celinta ee suurtogalka ah ayaa suurtagal ah in la bedelo habka aan u fahamno uguna daaweyno xanuunada dhaqdhaqaaqa.
Mingshan Xue, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Baylor College of Medicine, Houston, TX
Farsamaynta iyo Mashruuca Nidaamka Muusigga ah ee Qalabaynta Qalalaasaha Qalabka ah ee Vostostatic In Vivo
Hagaajinta agagaaraha adag iyo bedelida waddamada gudaha, maskaxda caafimaadku waxay xajisaa isku dheelitir joogto ah oo u dhexeeya kacsanaanta iyo ka hortagga (inta badan lagu tilmaamo sida saamiga E / I) taas oo si aad ah ugu xasilloon. Sidee ayay maskaxdu u joogtaa miisaankan? Dr. Xue's laboratory wuxuu sahmin doonaa su'aashan, isku duba ridida molecular, genetic, electrophysiological, optogenetic, sawirada, iyo hababka anatomical si loo go'aamiyo in balaastigga caadiga ah uu nidaamiyo jajabyada habka gaarka ah ee kudhaca jiilka, taas oo ilaalineysa heerarka dhaqdhaqaaqa neuronal iyo guryaha wax ka qabashada. Qaadashada faham qoto dheer oo ah sida maskaxda caadiga ah ay ufudud u yeelato xannibaadaha ayaa xoojin karta habka loogu talagalay in lagu daaweeyo cudurada dareemayaasha ee khalkhalka dabiiciga ah ee maskaxda.
Brad Zuchero, Ph.D., Kaaliyaha Professor of Neurosurgery, Jaamacadda Stanford, Palo Alto, CA
Mechanisms of Myelin Membrane Kobaca iyo Wareejinta
Maqnaanshaha myelin - insulatorka korontada ee dusha sare ee qulqulka neuronal-wuxuu keeni karaa awood daran iyo garaadka garaadka ee bukaanka qaba sclerosis badan iyo cudurrada kale ee nidaamka dareenka dhexe. In la dhiso "habdhismeedka buugta" ee qaababka istiraatiijiga ah ee xoojiya abuurista myelin hada waa hadafka Dr. Zuchero ee shaybaadhka cilmibaadhista ee Jaamacadda Stanford. Isku-dubbaridka habab cusub oo ay ku jiraan microscopy-xallinta qiyaasta, genome-keeda CRISPR / Cas, iyo qalabka cytoskeletal ee novel-ka ee lagu sameeyay shaybaarkiisa, kooxda Zuchero ayaa baaraya sida iyo sababta finanku ay u baahan yihiin si xun u kala jajabnaanta ficilka oligodendrocyte actin cytoskelton, waxay muujinaysaa bartilmaameed cusub ama jidad daweyn ah oo loogu talagalay dib-u-dhiska iyo dayactirka.
Martha Bagnall, Ph.D., Kaaliyaha Professor of Neuroscience, Jaamacadda Washington ee St. Louis School of Medicine
Xisaabinta dareenka iyo mootada ee koontaroolka rasmiga ah ee hoose
Gaaritaanka ayaa muhiim u ah hawlaha caadiga ah, lakiin wax yar ayaa loo yaqaanaa sida maskaxdu ay ugu guulaysato calaamadaha dareenka ee ku saabsan jihada, dhaqdhaqaaqa iyo culeyska iyada oo loo marayo xangulaha si loo ilaaliyo jirka "dhinaca midig". on nidaamka vestibular of Zebrafish, qaabdhismeedka leh xadhigga laf-dhabarka si weyn u la mid ah naasaha limbed. Horumarinta hore, xadhkaha lafdhabarta ee xayawaanka yareerna ah waa kuwo hufan, iyagoo cilmi-baadhayaasha siinaya qiimo badan oo ka mid ah dadyowga kala duwan ee nuucyada loo isticmaalo inta lagu jiro dhaqdhaqaaqyada kala duwan. Inaad barato waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan sida loo maro hababka marxaladaha kala duwan ee hore loo marayo inta lagu guda jiro dabeecadaha dambe ee xayawaanka-u oggolaanaya xayawaanka si ay u hagaajiyaan isbeddelka rukunka iyo qashinka-Bagnall ee cilmi-baarista ayaa laga yaabaa inay muujiso helitaan cusub oo ku saabsan isku xirnaanta neerfaha culus ee maamula dhaqanka u dhigma ee dadka. Shaqadeeda waxay sidoo kale u sheegi kartaa horumarinta qalabka caawinaya dadka inay dib u helaan dheelitirkooda iyo durbaba, iyo inay hagaajiyaan nolosha dadka ay miisaankoodu ku xumaaday dhaawac ama cudur.
Stephen Brohawn, Ph.D., Kaaliyaha Professor of Neurobiology, Helen Wills Neuroscience Institute, Jaamacadda California, Berkeley
Mechanisms of dareemaha awood bayoolaji
Dr. Brohawn wuxuu barayaa nidaamka korantada nolosha ee laga helo muuqaalka molecular iyo biophysical, iyada oo xoogga la saarayo helitaanka jawaabta su'aasha "Sideen u dareemeynaa? " Awoodda nidaamka dareenka ee dareemayaasha farsamada waa mid ka mid ah aasaaska dhageysiga iyo dheelitirka, laakiin saynisku weli wali shaaca ka qaadin mashiinnada borotiinka oo beddelaya xoogagga farsamaysan ee curyaaminta korantada. Isticmaalida noocyo kala duwan oo ka soo baxa kiriimyada raajada oo loo yaqaan 'cryo-electron microscopy', shaybaarta Brohawn ayaa qaadata 'hoosta hoose' ee su'aasha ah, qabashada xakamaynta atomiga ee borotiinka xuubka ah marka nasashada iyo xooggaba. Qaadashada fahamka sida maqalka iyo isku dheelitirka shaqada ee heer jajaban oo faahfaahsan ayaa laga yaabaa inay saldhig u noqoto daweynta cusub si loo hagaajiyo nolosha dadka shakhsiyaadka la kulmay maqalka ama luminta maqaarka.
Mehrdad Jazayeri, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Machadka Massachusetts ee Teknoolojiyada / Machadka Machadka Cilmi-baarista Maskaxda
Qalabka xaraashka ah ee waqtiyada muraayada jilicsan
Dr. Jazayeri waxay barataa sida maskaxdu ay u socoto wakhti ayadoo la baarayo niyadda jimicsiga oo noo ogolaaneysa in aan rajeyno, cabirno, iyo soo saarno waqtiyo kala duwan. Marka laga sheekeysto wada sheekeysiga, barashada muusikada, si loo ciyaaro isboortiga, waqtigu waa mid muhiim u ah fahamka iyo farsamada, laakiin mabaadii'da aasaasiga ah ee aasaasiga ah iyo hababka maskaxeed ee wakhtiga ayaa weli aan la aqoon. Si aad u ogaatid dhismaha muhiimka ah ee dhismaha, Jazayeri wuxuu baray jaanisyo si loo soo saaro wakhti go'an, sida haddii lagu garaaco muusikada - hab uu sii wato horumarka iyada oo shaybaarkiisa cilmi-baaristu ay u shaqeyneyso si loo ogaado asalka asaliga ah ee isdhexgalka dareemada, iyo sababo macquul ah. Cilmi-baaristiisu waxay sii wadi kartaa fahamkeena isbedelka garashada ee noo ogolaanaya inaanu bixino dareenka, la qabsiga macluumaadka cusub, iyo in la sameeyo odhaahyo, iyada oo aqoonsanaya bartilmaameedyada waaweyn ee noocyada kala duwan ee garashada garashada.
Katherine Nagel, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Jaamacadda New York University School of Medicine / Neuroscience Institute
Nidaamka naqshadaha ee dabeecadda raadinta dabeecadda ah ee dabeecadda raadinta ee drosophila melanogaster
Dr. Nagel wuxuu ogaaday sida dukaamada miraha ay isugu keenaan macluumaadka dareenka si ay u helaan habkooda cunto - dabeecad sahlan oo laga yaabo inay iftiin cusub u yeelato wareegga neerfaha ee maskaxda oo u oggolaanaya in maskaxdu ay u rogto dareemo ficil. Qalab maskaxeed oo leh maskax fudud oo awood u leh inuu sameeyo "go'aamada garabka," duuduubka miraha way soo jeedaan marka ay la kulmaan duufaanta isbeddelka urta soo jiidashada leh, raadso hoos udhaca marka urta lumo. Si aad u hesho ilo cunto ah, duqsigu waa inuu dhexgaliyaa wax-qabadka, farsamada, iyo wax-aragnimada muuqda, wuxuuna beddel-geliyaa waxyaabahaan go'aannada macquulka ah. Dumarka Nagel waxay isticmaalaan falanqaynta habdhaqanka habdhaqanka ah, farsamaynta maskaxda, farsamooyinka hidda, iyo qaabka xisaabinta si loo ogaado sida isdhexgalka ee ka shaqeeya hal unug, hal nadiif ah mid ka mid ah hababka hagid hore ee maskaxda. Mid ka mid ah baadhayaashii ugu muhiimsanaa barnaamijka National Science Foundation oo la yiraahdo "Cracking Code of Olfactory," cilmi-baadhista Nagel ayaa horay u sii marin kara neuroscience jihada cusub, oo ka muuqda wax badan oo ku saabsan sida maskaxda bani'aadamku u xisaabiso meel iyo waqti, si loo ogaado horumarka mustaqbalka ee olfactory robots.
Matthew Pecot, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Harvard Medical School
Qeexida calaamad-isweydaarsiga qoraalka ah ee kumbuyuutarka ee nidaamka naqshadaha Drosophila
Xaqiiqda oo ay tahay nuucyada nuddoonka ah ee isku xirka synaptic ayaa aasaas u ah dabeecadaha xayawaanka, haddana sida qanjiradu u aqoonsadaan lamaanayaasha saxda ah ee saxda ah iyada oo ay adag tahay in dhibka hurgunka ah ee nidaamka dareenka aysan cadeyn. Si loo ogaado mabaadi'da maadiga ah ee asal u ah qiyaasta qalafsan ee "Pecot Lab" waxay ku xirantahay naqshadaha necbaalka ee nidaamka muuqaalka duulista, kaas oo ka kooban noocyo hidde ah oo loo yaqaan "genesically accessible neuron" oo leh habab loo yaqaan ee isku xirnaanta synaptic. Iyadoo lagu saleynayo cilmi-baaristooda, waxay soo jeedinayaan in lamaanayaasha saxda ah ee astaamaha ah ay muujinayaan borotiinka caadiga ah ee miisaanka caadiga ah kaas oo xakameynaya muujinta meco-baarayaasha oo baraya isku-xirnaanta synaptic. Xaqiijinta in neuranno loo qoondeeyey inay sameystaan xidhiidhyo waxay muujinayaan isla miisaaniyadaha mihnadlaha ah inay bixin karaan istaraatiijiyad sahlan oo lagu dhisayo isku xirnaanta neeriga. Iyada oo sii kordheysa oo caddaynta caddaynta cilladaha ku xirnaanta neeriga ah sida darawalnimada cudurka neurologiga, cilmi baarista Dr. Pecot ayaa dhiiri gelin karta istiraatiijiyooyinka daaweynta ee diirada saaraya dib u soo celinta xiniinyaha neerfaha ee dadka dhibaateysan.
Michael Yartsev, Ph.D., Kaaliyaha Bioengineering Assistant Professor, Helen Wills Neuroscience Institute, Jaamacadda California, Berkeley
Naasiriyoolojiga aasaasiga ah ee barashada wax soo saarka dhawaaqa ee maskaxda naasaha ee koraya
Luqadda ayaa ku jirta wadnaha ah waxa macneheedu tahay in uu noqdo aadanaha. Waxaan leenahay awood aan ku baran karno barashada dhawaaqa ah ee aan la wadaagno noocyo yar oo nuucyo ah. Dr. Yartsev wuxuu bilaabay baaritaan faahfaahsan oo ku saabsan barashada wax soo saarka dhawaaqa ee maskaxda mammalian, iyada oo la isticmaalayo budhcad farabadan si ay uga caawiso ka jawaabida su'aasha ah waxa ku saabsan maskaxdeenna noo ogolaaneysa inaan barano luqadda. Isticmaalidda tiknoolajiyadda cusub ee loo yaqaano nukliyarka caadiga ah ee nukliyeerka, maaddada 'optogenetics', sawiridda iyo sawirada anatomical, Yartsev iyo kooxda ayaa rajeynaya inay xalliyaan hababka neerfaha ee hoos yimaada awoodda maskaxda ee lagu helo luqadda. Shaqada Yartsev ayaa sidoo kale siin karta fikrado cusub oo ku saabsan dib-u-dhacyada hadalka carruurnimada, af-soomaaliga iyo luuqadaha kale ee lumiska iyo horumarka.
Mark Andermann, Ph.D., Kaaliyaha Professor of Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center, Dugsiga Caafimaadka Harvard
Waddada gaabinta wax-qabadka cuntada ee maqalka jawiga cuntada ee kortex-insulada
Cilmi-baaristii Dr. Andermann wuxuu wax ka qabtaa siyaabaha maskaxda u ogaadaan oo u dhaqdhaqaaqa sawirrada la xiriira cuntada, gaar ahaan marka qofku gaajo u yahay. Shaqadiisu waxay ku saleysantahay baahida degdegga ah ee bulshadeed si loo hormariyo daweynta guud ee buurnaanta. Aadanuhu waxay fiiriyaan waxyaabaha ay jidhkooda u sheegaan inay u baahan yihiin. Feejignaan badan oo ku saabsan calaamadaha cuntada, taas oo keenta in la raadiyo cunto ka badan intii loo baahdo, waxay ku sii jiri kartaa shakhsiyaadka qaba buurnaanta ama cunto cunidda, xitaa marka la fadhiisto. Dumarka Andermann waxay samaysay hab ku salaysan laba sawir oo calcium ah iyada oo loo marayo khiyaamo si loo barto boqolaal miyir-beelka miyirka ah, waxayna ogaatay in jawaabta maskaxda ee sawirrada la xidhiidha cuntadu ay ku kala duwanyihiin iyadoo ku xiran hadday jiirtu gaajeysnayd iyo mid calaamadaysan. Kombiyuutarka Andermann wuxuu la shaqeeyaa khabiirada shaybaadhka ee Dr. Brad Lowell ee maskaxda xakameynaya gaajada-si loo baro xajka xajmiga xayawaanka si loo raadiyo siyaabo looga hortago xakamaynta cuntooyinka khaldan ee maadooyinka caanka ah.
John Cunningham, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Department of Statistics, Jaamacadda Columbia
Qaab-dhismeedka xisaabinta ee dadweynaha qanjirrada ee ku yaal koontada
Ujeeddada cilmi-baarista ee Dr. Cunningham waa in la hormariyo fahamka sayniska ee asalka habdhaqan ee dabeecadaha adag. Tusaale ahaan, faham fiican ee doorka maskaxda ee abuuritaanka dhaqdhaqaaqa ikhtiyaarka ah wuxuu suurtagal noqon karaa in malaayiin qof oo qaba naafonimada ay sababaan cudur iyo dhaawac. Cunningham waa qayb ka mid ah kuwa yar yar laakiin sii kordhaya ee tirakoobayaasha oo isticmaalaya farsamooyinka iyo farsamooyinka barashada mashiinka cilmi baarista neuroscience. Wuxuu isku daraa qaybaha xisaabta, tirakoobka, iyo sayniska kombiyuutarka si loo soo saaro fikrado macne leh oo ka soo baxa miisaaniyado aad u ballaadhan oo lagu sameeyay tijaabooyin. Wuxuu doonayaa inuu xoojiyo farqiga u dhaxeeya duubista xogta iyo mushaharka sayniska, isagoo doonaya inuu abuuro qalab farsamo oo isaga iyo cilmi-baarayaasha kale ay xajin karaan. Qaababka falanqaynta ee awood u leh inay wax ka qabtaan datasets aad u ballaaran ayaa lagama maarmaan u ah beerta, gaar ahaan cilmi-baarayaashu waxay ku qoraan xogta sii kordhaysa ee adag.
Roozbeh Kiani, MD, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Jaamacadda New York, Xarunta Sayniska Nool
Nidaamyada go'aanka ah ee hannaanka ah ee ka shaqeeya wakhtiyada kala duwan ee qaddarinta waxay ku hoos jiraan doorashooyinka iyo isbedelka istaraatijiyadda
Dr. Kiani wuxuu baarayaa sida dabeecadaha la qabatimay ay ku dhacaan go'aan qaadashada. Go'aannada waxaa lagu hagaa macluumaad la heli karo iyo istaraatiijiyooyin isku xira macluumaadka ficilka. Ka dib natiijo xumi, laba ilo oo suurta gal ah oo ah istiraatiijiyad qaldan ee qaldan iyo xogta liidata-waa in la kala saaraa si loo hagaajiyo waxqabadka mustaqbalka. Nidaamkani wuxuu ku xidhan yahay isdhexgalka qaybo badan oo juquraafi ah iyo kuwo yaryar oo isku dhafan oo si wadajir ah u matala macluumaadka dareenka, dib u soo xasuusashada xusuusta, iyo qorsheynta iyo fulinta falalka la doonayo. Cilmi-baaristii Dr. Kiani wuxuu diiradda saari doonaa hababka neerfaha ee hirgeliya geeddi-socodka, gaar ahaan sida ilaha macluumaadka loo wadaago, sida macluumaadka loo qoondeeyay loo soo xushay iyo ka soo jiidatay mid ka mid ah hal maskax si kale, iyo sida geeddi-socodka go'aan-qaadashada uu u kobcayo fikradaha shakhsi ahaaneed ee ku saabsan Natiijooyinka la filayo. Daraasaddiisu waxay yeelan kartaa saameyn muddo dheer ah oo ku aaddan daraasadda xanuunka neerfaha ee carqaladeynaya geeddi-socodka go'aan-qaadashada sida schizophrenia, xanuunka qallafsan, iyo Alzheimers.
Yuki Oka, Ph.D., Kaaliyaha Professor of Biology, Machadka Teknoloojiyada California
Qaababka Dhexdhexaadka ah iyo Xarumaha Dhexe ee Xakamaynta Nukliyeerka
Shaybaadhka Dr. Oka waxa uu barayaa hababka neerfaha ee jidhka ka soo baxa ee dareeraha, oo ah hawsha aasaasiga ah ee nidaamiya isu dheelitirka biyaha iyo cusbada jirka. Kooxdiisa ayaa ujeedadeedu tahay inay fahmaan sida calaamadaha dhexe iyo kuwa dhexe ay u maamulaan habdhaqanka cabitaanka biyaha. Hadafkan ujeedada, kooxda cilmi-baarista waxay isku-duba-ridayaan qalabka faytoolojiga iyo qalabka neefsiga si loo qeexo wareegyada maskaxda ee gaarka ah ee door weyn ka ciyaaraya xakamaynta haraadka. Waxay markaa ka baaraandegi doonaan sida hawlaha wareegyadaasi u habeynayaan calaamadaha biyaha dibadda. Shaqadiisu waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa daaweynta cusub ee daaweynta ee xanuunka cuntada la xiriira.
Abigail Person, Ph.D., Kaaliyaha Professor of Physiology and Biophysics, Jaamacadda Colorado Denver
Farsamooyinka wareegga ee saxda ah ee gawaarida
Dhaq-dhaqaaqu waxay udub-dhexaad u tahay dabeecadaha oo dhan, hase yeeshee xarumaha xakamaynta maskaxda ayaa si fudud loo fahmi karaa. Dr. Shaqada shaqsigu wuxuu sahamiyaa sida maskaxdu u socoto dhaqdhaqaaqa. Shaybaarka shakhsiga wuxuu si gaar ah u xiiseynayaa qayb qadiimi ah oo maskaxda ah oo la yiraahdo cerebellum, isagoo weydiinaya sida ay calaamadaha u xaqiijiyaan amarrada gawaarida ee joogtada ah. Muraayaddu waxay si gaar ah u soo jiidatay falanqaynta wareegga sababta oo ah noocyada unugyada iyo unugyada ayaa si fiican loo qeexay. Si kastaba ha noqotee, qaababka soo saarida, oo la yiraahdo nuclei nuclei, waxay jebinayaan sharcigaan waana mid aad u qoto dheer, sidaa daraadeed, aad u jahwareer badan. Isticmaalidda farsamooyin kala duwan, farsamoyaqaan, farsamooyinka anatomical iyo farsamooyinka, cilmi-baaristu waxay ujeedadeedu tahay in la xakameeyo iskudhafyada calaamadaha ee nuclei si ay u fasiraan sida ay ugu adeegto xakamaynta mootada. Qofku wuxuu filayaa in cilmi-baaristu ay siin karto daaweeynayaasha si ay u fahmaan xeeladaha daaweynta ee dadka qaba cudurka cerebellar, waxaana laga yaabaa in ay gacan ka geysan karto fasalka teknoolajiyada isticmaala calaamadaha neuralada si loo xakameeyo addimada.
Wei Wei, Ph.D., Kaaliyaha Professor of Neurobiology, University of Chicago
Qalabka dendritic ee dhaqdhaqaaqa muuqaalka ee sawir-qaaddada
Cilmi-baarista Dr. Wei ayaa raadinaysa in la fahmo hababka neerfaha ee dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa laf-dhabarka. Marxaladda ugu horeysa ee waxqabadka muuqaalka ee maskaxdu waxay ku dhacdaa hiddo-qabadka, meesha fotosurada ka soo baxday addiga jireed ayaa loo badalaa calaamadaha nudaha ee indhaha. In badan oo ka mida kamarad, raajada ayaa u shaqeysa sida kombiyuutar yar oo bilaabaya in ay ka baaraandegaan aragti muuqaal ah oo ku dhufto ilo badan oo xog ah ka hor inta aanay u gudbin xarumaha muuqaalka sare ee maskaxda. Qiyaasaha hadda jira waxaa ka jira in ka badan 30 xargo oo ah dareemaha, wax walba oo ka mid ah hababka kala duwan, sida dhinacyada dhaqdhaqaaqa, midabka iyo isdhexgalka. Deeqda Dr. Wei ayaa isticmaalaya nalalka iftiinka si ay u bartaan sida loo arko sida ay sawiradu u go'aamiso jihada sawirka. Shaqadeeda waxay soo saari doontaa shuruucda waxqabadka muuqaalka ah ee heerka hoose iyo heer-jimicsiga, iyo in la fahmo mabaadi'da guud ee xisaabinta maskaxda ee maskaxda.
Susanne Ahmari, Jaamacadda Pittsburgh
Aqoonsiga Isbedelada Xilliyeedka Nooca-Dhexdhexaadinta Dabeecadaha la xiriira OCD
Marlene Cohen, Jaamacadda Pittsburgh
Tijaabooyinka Xaaladda iyo Dhexdhexaadinta ee Hantidhowrka ee Farsamooyinka Naas-nuujinta Qaabilsan ee Feejignaanta Ku lug leh isdhexgalka u dhexeeya xaafadaha koonfureed
Daniel Dombeck, Jaamacadda Northwestern
Dhaqdhaqaaqa Farsamooyinka, Ururka iyo Tifaftirka Goobta Qalabka Dendritic Spear
Surya GanguliJaamacadda Stanford
Laga soo bilaabo xogta Neur ilaa fahamka Neurobiological iyada oo loo marayo Tirakoobka Heerka Sare iyo Aragtida
Gaby Maimon, Jaamacadda Rockefeller
Qaabbilaadda Naas-nuujinta ee loogu talagalay Hawlaha Gudaha ee gudaha
Dib-u-hagaajinta Mashruuca Nidaamka Dabiiciga ah ee Qalabka Nidaamka Qiimaynta Caqliyada
Jessica Cardin, Jaamacadda Yale
Mechanisms of Regulation Xakamaynta Gobolka ee Ku-Xadka
Robert Froemke, Dugsiga NYU ee Daawada
Naqshadaha Nuuralinta iyo Buufiska ee Xakamaynta Habdhaqanka Bulshada ee Xaasaasiga ah
Ryan Hibbs, UT Xarunta Caafimaadka ee Koonfur-Galbeed
Qaabdhismeedka iyo Qaabdhismeedka Dareemayaasha Necalkal Acetylcholine
Jeremy Kay, Jaamacadda Duke
Kulanka Rakaabka Jihada-Raadinta Xulashada
Cortex Gawaarida Gawaarida Waxbarashada Gawaarida
Ilana Witten, Jaamacadda Princeton
Dib udhigista Xusuusta Shaqada: Dopamine Neurons iyo Nidaamkooda Target
Optically Probing Naqshadda Aasaasiga ah ee aragtida
Mark Churchland, Jaamacadda Columbia
Dhismaha Neural-ka ee Bilowga Dhaq-dhaqaaqa Iskaa-wax-u-qabsiga
Elissa Hallem, University of California - Los Angeles
Urur Fulineed ee Xaaladaha Dareenka ee C.Elegans
Andrew Huberman, University of California - San Diego
Xawaaraha Trans-Synaptic ee Hagaajinta Maareynta Dirawalka
Dayu Lin - Xarunta Caafimaadka NYI Langone
Qaabdhismeedka wareegga ee dib-u-dhac dhexdhexaadin ah
Nicole Rust - Jaamacadda Pennsylvania
Qaababka Nuuraliyaanka ah ee Mas'uulka ka ah Aqoonsiga Noocyada iyo helitaanka Himilooyinka
Anne Churchland, Cold Shub Xilliga Guga
Nanjing Circuits ah ee Go'aan-Gaar ah ee Gaarista
Patrick Drew, Jaamacadda Pennsylvania State University
Sawiridda Naas-nuujinta Xididada Qalabka Dabeecadda
Nidaamka Qalabaynta ee Qaabilaynta Muuqaalka iyo Go'aansiga
Mala Murthy, Jaamacadda Princeton
Naas-nuujinta Qalabka Nadaafadeed ee Aasaasiga ah ee Isgaadhsiinta Akhstic ee Drosophila
Jonathan Pillow, University of Texas ee Austin
Dib u dhigista Wakiilada Kortmeelka ee Heerka Suxuumadaha, Dhaqaalaha, iyo Qabsashada
Vanessa Ruta, Jaamacadda Rockefeller
Waxqabadka Qaabdhismeedka Dhaqdhaqaaqa Dhaqanka ee Neural Xaaladaha
Adam Carter, Ph.D., Jaamacadda New York
Sifafka Gaarka ah ee Xaaladaha Striatal
Sandeep Robert Datta, MD, Ph.D., Dugsiga Caafimaadka Harvard
Naas-nuujinta Naas-nuujinta Awood-darrada Aargoosiga-Cilmi-qaadista
Qing Fan, Ph.D., Jaamacadda Columbia
Mashruuca Molecular ee Gawaarida GABA ee Metabotropic Function
Xaqiijinta Cortical Correction ee Xisaabinta dhow
Winrich Freiwald, Ph.D., Jaamacadda Rockefeller
Laga soo bilaabo Aqoonsiga Fada ee Aqoonsiga Bulshada
Nathaniel Sawtell, Ph.D., Jaamacadda Columbia
Mechanisms for Prediction Sensory ee Xilliyada Cerebellar
Anatol C. Kreitzer, Ph.D., J. David Gladstone Institute
Function iyo Qalalaasaha Basal Ganglia Circuits ee Vivo
Seok-Yong Lee, Ph.D., Xarunta Caafimaadka Jaamacadda Duke
Qaabdhismeedka iyo farshaxanka ee dareemayaasha tamarta qalabka sodium
Stavros Lomvardas, Ph.D., Jaamacadda California
Farsamooyinka maaddada farsamooyinka ee habka daaweeye ee olfactory
Song-Hai Shi, Ph.D., Xarunta Kansarka Kudheelka ee Memorial-Kettering
Wax soo saarka dhuunta iyo ururinta interneurons ee ku jira nambarka neefka
Urur-ka-shaqeynta kiniiniga kortikal
Mashruuca Molecular iyo Cellulars of Mammalian Touch iyo Xanuun
Kaalinta Kortekooliyada Casriga ah ee Cortex ee Hagaha iyo Eye Dhaqanka
Nathaniel Daw, Ph.D., Jaamacadda New York
Go'aanka Sameynta Hawlaha Lagu Dhisayo, Qodobbada Loo Qaadayo: Isku-dhafashada Habdhaqanka, Habdhaqanka, iyo Naas-nuujinta
Doorka Hawlgalka Fiican ee Dejinta Iskuduwaha Dareenka
Tatyana Sharpee, Ph.D., Machadka Salk ee Daraasaadka Bayalka
Muuqaalka Iskujirida ee Sawirrada muuqaalka ee Maskaxda
Kausik Si, Ph.D., Boostada Machadka Cilmi-baarista Caafimaadka
Doorka Maaddada Prion-sida Molecule ee Xasuusta
Mechanisms of Specific Synthtic in Cudurka Spert Cord
Wesley Grueber, Ph.D., Xarunta Caafimaadka ee Columbia Columbia
Dendritic Field Describing by Culimada Soo Jiidashada ah
Greg Horwitz, Ph.D., Jaamacadda Washington
Caawinta Magnocellular ee Midabaynta Midabka
Coleen Murphy, Ph.D., Jaamacadda Princeton
Astaamaha Maasuqu ee Xasilinta Xusuusta Mudada Dheer ee Da'da
Bence Olveczky, Ph.D., Jaamacadda Harvard
Ururka Shaqada ee Nawkiladaha Xilliyada Ogaanshaha Barashada Dareemaha
Liam Paninski, Ph.D., Jaamacadda Columbia
Isticmaalaan Tilmaamaha Soodhiga ee Sare si loo Ciribtiro Xeerka Dadweynaha
Bijan Pesaran, Ph.D., Jaamacadda New York
Go'aansiga Goob Joogta ah iyo Meel Gaar Ah
Qalabka Functional of Neural Coding ee Retina
Karl A. Deisseroth, MD, Ph.D., Stanford University Medical School
Wareysiga Multi-Channel Quick Optical Interrogation ee Circuitry Circuit Neual Living
Gilbert Di Paolo, Ph.D., Xarunta Caafimaadka ee Columbia Columbia
Nidaam Cusub oo loogu talagalay Is-beddelka Qalalaasaha Is-beddelka ee Mabaadi'dda PIP2 ee Dabaysha
Adrienne Fairhall, Ph.D., Jaamacadda Washington
Waxyaabaha lagusoo gooyo ee ku-meel-gaadhka ah ee La-xisaabtanka iyo Xakamaynta Mushaaraadka
Maurice A. Smith, MD, Ph.D., Jaamacadda Harvard
Moodhalka Heshiiska ee Isdhexgalinta Nidaamyada La qabadsiiyo si loo sharaxo Guryaha Waxbarashada Gaadiidka Gaaban iyo Waqti-Dheer
Fan Wang, Ph.D., Xarunta Caafimaadka Jaamacadda Duke
Maaddooyinka Molecular iyo Cilmi-baadhista Hiddaha ee Mammalian Touch Sensation
Rachel Wilson, Ph.D., Dugsiga Caafimaadka Harvard
Noocyada Biyofizik iyo Molecular ee Iskudhicidda Dhexdhexaadinta Central ee Drosophila
Sidee u aragtaa aragtida aragtida leh ee isbeddelka leh ee isbeddel ku yimaad dhaqdhaqaaqa neerfayaasha?
James DiCarlo, MD, Ph.D., Massachusetts Institute of Technology
Maqnaanshaha Qalabka Nidaamka Dhexdhexaadinta ee Aqoonsiga Walaxda Waqtiga Dabeecadda Dabiiciga ah
Florian Engert, Ph.D., Jaamacadda Harvard
Astaanta Naafonimada ee Dabeecadda La-Qabtay ee Dhaqanka ee Larval Zebrafish
Youxing Jiang, Ph.D., University of Texas, Xarunta Caafimaadka ee Koonfureed
Mechanisms Molecular of Ion Doorashada ee hababka CNG
Mashruucyada Xasuusashada Visuospatial iyo Xusuusta Shaqada
Hongjun Song, Ph.D., Jaamacadda Johns Hopkins University ee Daawada
Mechanisms Habeynta Isdhexgalka Synaptic ee Neurons Generated in Maskaxda Dadka Weyn
Elke Stein, Ph.D., Jaamacadda Yale
Isbeddelidda Nitrin-1-Dhexdhexaadin ah ee Iskudhinimo iyada oo loo marayo Crocstalk Intracellular
Athanossios Siapas, Ph.D., Machadka Kaliyah ee California
Isdhexgalka Cortico-Hippocampal iyo Is-beddelidda Xusuusta
Nirao Shah, MD, Ph.D., Jaamacadda California, San Francisco
Wakiil ka mid ah Habdhaqanka Jooniska Dimorifiska ee Maskaxda
Aravinthan Samuel, Ph.D., Jaamacadda Harvard
Nidaamka Biyofiska ah ee Qaabdhismeedka Habdhaqanka Dabeecadda
Bernardo Sabatini, MD, Ph.D., Dugsiga Caafimaadka Harvard
Xeerarka Sinaptic ee Nidaamka Neuromodulatory
Miriam Goodman, Ph.D.Jaamacadda Stanford
Fahmidda Qalabka Sawir-Qaadashada Sawir-gacmeed ee Neurons
Matteo Carandini, Ph.D., Machadka Cilmi-baadhista Eye Smith-Kettlewell
Waxyeelada Jawaab-celinta Dadweynaha ee Cortex Muuqaal
Ricardo Dolmetsch, Ph.D.Jaamacadda Stanford
Falanqaynta Falanqaynta ee Kalsiyumka Baranbarada
Loren Frank, Ph.D., Jaamacadda California, San Francisco
Nuural Dhexdhexaadinta Waxbarashada ee Hippocampal - Circuit Cortical
Rachelle Gaudet, Ph.D., Jaamacadda Harvard
Daraasadaha Dhismaha ee Qiyaasaha Heer-kuleelka Dareeraha ee TRP
Z. Josh Huang, Ph.D., Cold Shub Xilliga Guga
Mashruucyada Maaddooyinka Molecular oo hoos imaanaya Nidaamka Subcellular ee GABAergic Synapses
Kang Shen, MD, Ph.D.Jaamacadda Stanford
Fahmidda Qodobka Molecular ee Muuqaalka Targetka ee qaabaynta Synapse
David Zenisek, Ph.D., Jaamacadda Yale
Baarista xakamaynta Rugcadda Sinjiga ah ee Exocytosis
Michael Brainard, Ph.D. Jaamacadda California, San Francisco
Habdhaqanka Dabeecadda iyo Dhaqanka Nadiifnimada ee Adult Birdsong
Joshua Gold, Ph.D. Jaamacadda Pennsylvania School of Medicine
Neerarka Asaasiga Ah ee Go'aamada Aan Si Xeelad Ah Loo Xiriirin iyo Tallaabada
Jacqueline Gottlieb, Ph.D. Jaamacadda Columbia
Nooca Dhabarka ah ee Aragga iyo Feejignaanta Dufanka Kortex Guryo Jawi ah
Zhigang He, Ph.D. Isbitaalka Carruurta
Kormeerida Mechanisms of Axon Cusbashada Dib-u-dhaca ee Nidaamka Dareemida Xanuunka Adult
Kristin Scott, Ph.D. Jaamacadda California, Berkeley
Muuqaalada dhadhanka ee maskaxda Drosophila
Aaron DiAntonio, MD, Ph.D., Jaamacadda Washington
Falanqaynta Hiddaha ee Horumarinta Synaptic
Marla Feller, Ph.D., Jaamacadda California, San Diego
Nidaamka Dugsi-dejinta ee Nafaqo-darrada ah ee Horumarinta Mammalian Retina
Bharathi Jagadeesh, Ph.D., Jaamacadda Washington
Baaxadda Waxyaabaha iyo Nawaaxida Xuubka Xulashada ee Kortexleerka Cortex-ka
Bingwei Lu, Ph.D., Jaamacadda Rockefeller
Habka Hidda-u-Dhowrka ah ee Habdhaqanka Nuural Stem Cell
Philip Sabes, Ph.D., Jaamacadda California, San Francisco
Nidaamka Isku-dhafka ah iyo Mabaadi'da Xisaabinta ee Isku-xidhka Visuomotor ee Gaaritaanka
W. Martin Usrey, Ph.D., Jaamacadda California, Davis
Hawlaha Fikradaha ee Feedforward iyo Waddooyinka Jawaabta ee Vision
Daniel Feldman, Ph.D., Jaamacadda California, San Diego
Khariidadda Asaasiga ah ee Khariidadda Whisker Khariidad ku taal Cufex qamriga
Kelsey Martin, MD, Ph.D., University of California, Los Angeles
Isgaarsiinta Inta u dhaxaysa Sinis iyo Nucleus inta lagu guda jiro Nadiifinta Synaptic muddo dheer
Daniel Minor, Jr., Ph.D., Jaamacadda California, San Francisco
Daraasooyinka Sare-Xakamaynta ee Xeerka Ion Channel
John Reynolds, Ph.D., Machadka Salk ee Daraasaadka Biyolojiga
Nidaamka Isku-dhafka Nidaamka Isdhexgalka Muuqaalka
Leslie Vosshall, Ph.D., Jaamacadda Rockefeller
Biology Molecular ee Aqoonsiga Odorka ee Drosophila
Mechanisms of Formation Memory: Kordhinta horudhac ah Cabbitaanka Episodic
John Assad, Ph.D., Dugsiga Caafimaadka Harvard
Saameynta Hurgumada Muddada-dheer iyo Dhaqdhaqaaqa Gaaban ee Ku-saabsan Ku-Xakamaynta Muuq-galka Muuqaalka ee Cortex Parietal
Eduardo Chichilnisky, Ph.D., Machadka Salk ee Daraasaadka Biyolojiga
Farshaxanka iyo Fikirka Hawleedka: Dhiirrigalinta Calaamadaha Noocyada Caanaha ee Aqoonsiga ee Primate Retina
Kaalinta xakamaynta nidaamyada xayeysiiska ku salaysan ee korontada iyo koritaanka
Jeffry Isaacson, Ph.D., Jaamacadda California, San Diego
Mabaadi'da Isku-dhafan ee Xaaladaha Dhaqan-Dhexe ee Bartamaha
Richard Krauzlis, Ph.D., Machadka Salk ee Daraasaadka Biyolojiga
Isuduwidda Dhaqdhaqaaqa Isku-kalsoonaanta ee Isku-dhafka ah ee Collectulus Superior
Xasuusta iyo Iskuxirka ee Nidaamka Biyoolojiga
Jian Yang, Ph.D., Jaamacadda Columbia
Isku-darka Kalamoyinka iyo Iskudhufinta Qodobka Wax-ka-Beddelka Is-beddelada Qalalaasaha Casriga ah
Michael Ehlers, MD, Ph.D., Xarunta Caafimaadka Jaamacadda Duke
Qawaaniinta Molecular ee NMDA Receptors
In Vivo Analysis of Physiological Mutations that affect the Learning Cerebellum Depending Learning
Fred Rieke, Ph.D., Jaamacadda Washington
Xakamaynta Xaddidan iyo Fursado Xushmadda Noocyada Ganglionka ee Retinal Ganglion
Henk Roelink, Ph.D., Jaamacadda Washington
Sonic Hedgehog Calaamadaha Is-beddelka Qalalaasaha Maskaxda ee ay ku dhacdo Cyclopamine
Qaababka Mashruuca Bannaanka Hore
Paul Slesinger, Ph.D., Machadka Salk ee Daraasaadka Biyolojiga
Aqoonsiga isdhexgalka isdhexgalka ee ku lug leh Xeerka G Protein ee Qaybaha Potassium
Michael Weliky, Ph.D., Jaamacadda Rochester
Kaalinta Hawsha Qalitaanka Naas-nuujinta ee Kobcinta Muuqaalka
Axon Targeting ee Nidaamka Muuqaalka Drosophila
Phyllis Hanson, MD, Ph.D., Jaamacadda Washington University School of Medicine
Doorka Nadaafadayaasha Molecular ee Funynaptic Function
Eduardo Perozo, Ph.D., Jaamacadda Virginia School of Medicine
Daraasad Sare ee Qaab-dhismeedka ee K + Pore
Wendy Suzuki, Ph.D., Jaamacadda New York
Hawlgallada qiyaasta ee Kortex Parakippocampal Cortex
Ulrike I. Gaul, Ph.D., Jaamacadda Rockefeller
Qalabka Cell iyo Molecular ee Hanuuninta Axon ee Nidaamka fudud ee Vivo System
Mashruucyada Molecular ee Horumarka Dendrite: Daraasadaha GTPs Rac iyo Cdc42
Mark Mayford, Ph.D., Jaamacadda California, San Diego
Xakamaynta Xakamaynta Genetic of Synaptic Cudurka, Barashada, iyo Xusuusta
Peter Mombaerts, MD, Ph.D., Jaamacadda Rockefeller
Mechanisms of Qaybta Axon ee Nidaamka Olfactory
Samuel L. Pfaff, Ph.D., Machadka Salk ee Daraasaadka Biyolojiga
Xakamaynta Nadaafadda ee Nafaqada Qalitaanka Neerarka Gaarka ah ee Neuron Axon
David Van Vactor, Ph.D., Dugsiga Caafimaadka Harvard
Falanqaynta Genes ee Xakameynaya Hagaha Axka Qaadka ee Drosophila
Naasnobiological Basis of Attention Attention
Cali Hemmati-Brivanlou, Ph.D., Jaamacadda Rockefeller
Qodobada Molecular ee Nerogenesis-ka Nafaqada
Donald C. Lo, Ph.D., Xarunta Caafimaadka Jaamacadda Duke
Xeerarka Neurotrophin ee Xayiraadda Synaptic
Waxqabadyada Isku-dhafan ee Kortex-Dhexe
Tito A. Serafini, Ph.D., Jaamacadda California, Berkeley
Iskudhicidda iyo Astaameynta Kobaca Tarbiyada Xaraashka Maaddooyinka
Jerry CP Yin, Ph.D., Cold Shub Xilliga Guga
Xaqiiqo raadinta CREB iyo qaabeynta Xusuusta Muddada-dheer ee Drosophila
Qaadashada Mechanisms of Qaybaha Potassium-ku-Voltage
Alex L. Kolodkin, Ph.D., Jaamicadda Johns Hopkins University of Medicine
Mashruucyada Molecular ee Hagaha Kobcinta Kobaca: Hawlaha Semaphorin ee Waqooyiga Horumarinta
Michael L. Nonet, Ph.D., Jaamacadda Washington University School of Medicine
Horumarinta Hiddaha ee Horumarinta Qaababka Nuurnimada
Mani Ramaswami, Ph.D., Jaamacadda Arizona
Falanqaynta Hiddaanida Hababka Maareynta Dhibaatada
Michael N. Shadlen, MD, Ph.D., Jaamacadda Washington
Dhexgalka Dareenka iyo Xusuusta Shaqeynta
Alcino J. Silva, Ph.D., Cold Shub Xilliga Guga
Mashiinnada Jidhka Taageerida Habeynta Xusuusta ee Mouse
Rita J. Balice-Gordon, Ph.D., Jaamacadda Pennsylvania
Waxqabadka Ku-Xaqiijinta iyo Mabaadii Madaxbannaan ee Hoos-u-Dhisidda Hoos-u-Celinta iyo Dayactirka
Mark K. Bennett, Ph.D., Jaamacadda California, Berkeley
Xeerka Nidaamka Calaamadaha Dhabarka ah iyo Qalabka Fusion Machine by Protein Phosphorylation
David S. Bredt, MD, Ph.D., Jaamacadda California, San Francisco
Waxqabadyada nafleyda ee Nitric Oxide ee Horumarinta iyo Dib u Dhiska Nuuroniyaanka
David J. Linden, Ph.D., Jaamicadda Johns Hopkins University of Medicine
Meelaha Cudurka ah ee Macluumaadka Kaydinta ee Cerebellum
Richard D. Mooney, Ph.D., Xarunta Caafimaadka Jaamacadda Duke
Nidaamka Jilicsan ee Barashada Afka iyo Xasuusta
Charles J. Weitz, MD, Ph.D., Dugsiga Caafimaadka Harvard
Biology Molecular ee Mammalian Circadian Pacemaker
Ben Barres, MD, Ph.D., Stanford University School of Medicine
Horumarinta iyo Shaqeynta Glia
Allison J. Doupe, MD, Ph.D., Jaamacadda California, San Francisco
Qalabka Nuural-ka ah ee ku takhasusay Barashada Muhiimka ah ee Songbirds
Ehud Y. Isacoff, Ph.D., Jaamacadda California, Berkeley
Daraasadaha Molecular ee K + Channel Phosphorylation ee Vertebrate Central Neurons
Isku-darka Gen-Layer-ka gaarka ah oo ka soo jeeda Mammalian Cerebral Cortex
John J. Ngai, Ph.D., Jaamacadda California, Berkeley
Falanqaynta Dhulka Tifaftirka Nafaqooyinka Gaarka ah iyo Codaynta Macluumaadka Dhaqanka
Wade G. Regehr, Ph.D., Dugsiga Caafimaadka Harvard
Doorka Calcium-ka Cusbada leh ee Lagu Sameeyo Dhacdooyinka Dhexe
Ethan Bier, Ph.D., Jaamacadda California, San Diego
Cudurka Molecular ee Neurogenesis
Linda D. Buck, Ph.D., Dugsiga Caafimaadka Harvard
Aqoonsiga Qodobka Aqoonsiga iyo Aqoonsiga Macluumaadka ee Nidaamka Habdhaqanka Mammalian
Gian Garriga, Ph.D., Jaamacadda California, Berkeley
Isdhexgalka unugyada ee kudhaca jiilka C.elegans HSN Axons
Roderick MacKinnon, MD, Dugsiga Caafimaadka Harvard
Isdhexgalka hoose ee isdhexgalka ee Qaybta Kaararka Kaadida
Nipam H. Patel, Ph.D., Hay'adda Carnegie ee Washington
Doorka Gooseberry inta lagu guda jiro Drosophila Neurogenesis
Gabriele V. Ronnett, MD, Ph.D., Jaamicadda Johns Hopkins University of Medicine
Qaabdhismeedka Is-beddelka Calaamadaha Is-beddelka
Daniel Y. Ts'o, Ph.D., Jaamacadda Rockefeller
Muuqaal Sawirle ah ee Mechanisms of Behavior Behavior
Hollis T. Cline, Ph.D., Jaamacadda Iowa Medical School
Xeerarka Horumarinta Qanjidhka 'Neurotransmitter' iyo 'Protein Kinases'
Gilles J. Laurent, Ph.D., Machadka Kaliyah ee California
Qeybinta Noocyada Xaafadaha ee Xayawaanka Dareenka-Awooda
Ernest G. Peralta, Ph.D., Jaamacadda Harvard
Muscarinic Acetylcholine Wareegyada Dareenka Calaamadaha Naasnuujiyeyaasha
William M. Roberts, Ph.D., Jaamacadda Oregon
Ion Channels iyo Calcium Intracellular ee Nidaamka Timaha
Genetics ee VAMP iyo p65: Diiditaanka Siidaynta gudbinta ee Drosophila
Marc T. Tessier-Lavigne, Ph.D., Jaamacadda California, San Francisco
Nadiifinta, Isticmaalidda, iyo Calaamadaha Chemoattractant ee Hagaha Kobcinta Axons ee Nidaamka Dareemka Dhexe ee Nafaqada
John R. Carlson, Ph.D., Yale Jaamacadda Daawada
Nidaamka Molecular ee Nidaamka Dhaqanka Drosophila
Michael E. Greenberg, Ph.D., Dugsiga Caafimaadka Harvard
Xoojinta Korantada Dabeeciga Hoos-u-dhiska ee Neurons
David J. Julius, Ph.D., Jaamacadda California, San Francisco
Maaddooyinka Molecular ee Hawlaha Qalliinka ee Serotonin
Robert C. Malenka, MD, Ph.D., Jaamacadda California, San Francisco
Mechanisms-ka Qalabaynta muddada-dheer ee Hippocampus
Mechanisms Molecular ee LTP ee gobolka CA1 ee Rat Hippocampus
Kai Zinn, Ph.D., Machadka Kaliyah ee California
Cudurka Molecular ee Qaaxada Axon ee Drosophila Embryo
Neurogenetics ee R7 Horumarinta Unugyada Drosophila
Paul Forscher, Ph.D., Yale Jaamacadda Daawada
Calaamadda Is-beddelka ee Dhexdhexaadinta Xuubka Naas-Nuujinta-Dhexdhexaadiyaha
Michael D. Mauk, Ph.D., Jaamacadda Texas Medical School
Kaalinta Saamaynta Protein ee Ku-gudbinta Sinjiga iyo Buufiska
Eric J. Nestler, MD, Ph.D., Yale Jaamacadda Daawada
Aqoonsiga Maaddooyinka (Molecular Characterization) ee Cousuleus
Barbara E. Ranscht, Ph.D., Xarunta Cilmi-baarista Cancer La Jolla
Falanqaynta Qalabka Molecular ee Chick Cell Gogosha Glycoproteins iyo Doorarkooda Kobaca Neerarka Fiber
WQaadashada Kobcinta Kobcinta Diyaarso doorasho ku jirta wajiga dhibaatada
Craig E. Jahr, Ph.D., Jaamacadda Caafimaadka iyo Cilmiga Oregon
Nidaamyada Molecular ee Nidaamka Iskudhinta Nadaafadeed
Christopher R. Kintner, Ph.D., Machadka Salk ee Daraasaadka Biyolojiga
Naasnuujinta Cudurka Naasaasiga ee Amphibian Embryos
Jonathan A. Raper, Ph.D., Jaamacadda Pennsylvania Medical Center
Calaameysashada Molecules ee lagu Xakameynayo Xakameynta Awoodda Xuddunta Kansarka
Lorna W. Role, Ph.D., Columbia University College of Physicians iyo Qaliinka
Is-beddelashada Xayawaannada Asetylcholine Neconal
Charles Zuker, Ph.D., Jaamacadda California, San Diego
Isbeddelka Tilmaamaha ee Nidaamka Muuqaal
Xaaladaha Hippocampal Calcium: Biophysical, Pharmacological, iyo Functional Properties
F. Rob Jackson, Ph.D., Worcester Foundation oo loogu talogalay bayoolojiga dabiiciga ah
Nidaamka Molecular ee Habka Fududeynta Saamaynta
Dennis DM O'Leary, Ph.D., Jaamacadda Washington University School of Medicine
Daraasadaha Horumarinta Naaso-yaqaanka ah ee xooga saara kala-duwanaanta kala duwanaanta
Tim Tully, Ph.D., Jaamacadda Brandeis
Raadinta Maasuqu ee Drosophila Xusuusin Muddo Gaaban ah Mutant Amnesiac iyo Raadinta Qalabka Xusuusta Muddada-fog
Patricia A. Walicke, MD, Ph.D., Jaamacadda California, San Diego
Ciladda Hippocampal Neurons iyo Fibroblast Factor
Christine E. Holt, Ph.D., Jaamacadda California, San Diego
Axonal Pathfinding ee Cudurka Vertebrate Embryo
Stephen J. Peroutka, MD, Ph.D., Stanford University School of Medicine
Isdhex galka Calaamadaha Calaamadaha Cudurka Dabaysha ee Serotonin Central Subtypes
Randall N. Pittman, Ph.D., Jaamacadda Pennsylvania School of Medicine
Biochemical, Immunological, iyo falanqaynta fiidiyowga ee korriinka neuritis
A Habka Haweenta Hodan ah ee Neeriga Isku xirnaanta
Nidaamka Qalabka Nadaafadda ee Horumarinta Vocal
S. Marc Breedlove, Ph.D., Jaamacadda California, Berkeley
Saamaynta iyo Saamaynta Saamaynta Saamaynta Nuuriyada
Jane Dodd, Ph.D., Columbia University College of Physicians iyo Qaliinka
Nidaamyada Qalabka ah ee Dhexdhexaadinta Dhexdhexaadinta ee Neurons-ka Afkuubka ah
Haig S. Keshishian, Ph.D., Yale Jaamacadda Daawada
Go'aaminta iyo kala-duwanaansho ee Neptundergic Neptons ee loo yaqaan "CNS" Embryonic
Paul E. Sawchenko, Ph.D., Machadka Salk ee Daraasaadka Biyolojiga
Steroid-ku-xirnaansho Buufis ku leh Neef-Shaxda
Nidaamka AMP Nidaamka AMP iyo Cunto ee Drosophila
Scott E. Fraser, Ph.D., Jaamacadda California, Irvine
Cilmi-baadhisyo Daraasad iyo Daraasad ah oo ku saabsan Nashqadda Naqshadeynta iyo Iskuxirida Sinqalka
Michael R. Lerner, MD, Ph.D., Yale Jaamacadda Daawada
Xusuusin iyo Olfaction
Falanqaynta Immunological and Biochemical ee Proteoglycans ee Nidaamka Nereysiga ee CNS Embryonic
Jonathan D. Victor, MD, Ph.D., Jaamacadda Cornell University Medical College
Falanqaynta Falcelin-jawaab-celin ee Muuqaal Galka Gaar ah ee Caafimaadka iyo Cudurada
Richard A. Andersen, Ph.D., Machadka Salk ee Daraasaadka Biyolojiga
Muuqaal-Muuqaal Noocyo Xuub Nalalka Iftiimiya ee Kortekooliyada Casriga ah ee Mareekanka
Clifford B. Saper, MD, Ph.D., Jaamacadda Washington University School of Medicine
Abaabulka Nidaamka Dhiirrigelinta Kortida
Baadhitaannada Shaqada, Ururada, iyo Xakamaynta Nidaamka Neeriyada Neerarka ee Neuropeptide ee Aplysia
Mark Allen Tanouye, Ph.D., Machadka Kaliyah ee California
Biology Molecular ee Genes Kanal ee Drosophila
George R. Uhl, MD, Ph.D., Isbitaalka Guud ee Massachusetts
Nidaamka Xanuunada ee Neurotransmitter Systems: Xiriirinta Clinicopathological iyo Xeerarka Nafaqada Gaarka ah
Bradley E. Alger, Ph.D., Jaamacadda Maryland School of Medicine
Niyadjabinta Ka-hortagga Mashruucan wuxuu dhiirri-galin karaa Awood-siinta Daraasaadka ee Miisaanka Hippocampal
Ralph J. Greenspan, Ph.D., Jaamacadda Princeton
Daraasooyinka Genetic and Immunological of Molecules Surface iyo Kaalinta Horumarinta Neuronal ee Mouse
Thomas M. Jessell, Ph.D., Columbia University College of Physicians iyo Qaliinka
Doorka Neuropeptides ee Gudbinta Dareenka iyo Naqdiga
Bruce H. Wainer, MD, Ph.D., University of Chicago
Cholinergic Cholinergic Innasheega ee Caafimaadka iyo Cudurada
Peter J. Whitehouse, MD, Ph.D., Jaamicadda Johns Hopkins University of Medicine
Cudurka Aidsomical / Pathological of The Memory Deficits of Dementia
David G. Amaral, Ph.D., Machadka Salk ee Daraasaadka Biyolojiga
Daraasadaha Horumarinta iyo Xiriirinta Hippocampal
Robert J. Bloch, Ph.D., Jaamacadda Maryland School of Medicine
Macromolecules ee ku lug leh qaabaynta sinqaanka
Stanley M. Goldin, Ph.D., Dugsiga Caafimaadka Harvard
Dib-u-soo-kabashada, Nadiifinta, iyo Immunocytochemical Localization of Norronal Ion Transport Proteins of Mammalian Maskaxda
Stephen G. Lisberger, Ph.D., Jaamacadda California, San Francisco
Baaxad ahaanshaha 'Vestibulo-ocular Reflex'
Lee L. Rubin, Ph.D., Jaamacadda Rockefeller
Nidaamka Xadidaada ee Nidaamka Sharciga ee Musqusha-Musqusha
Theodore W. Berger, Ph.D., Jaamacadda Pittsburgh
Dhismayaasha Maskaxda ee Amnesia Human: Wax-barashada Nidaamka Caleenta Hippocampal-Subicular-Cingulate-Cingulate
Thomas H. Brown, Ph.D., Machadka Cilmi-baarista ee Hope
Falanqaynta Mucaawin ee Awoodda Xurmaynta ee Hippocampal Neurons
Steven J. Burden, Ph.D., Dugsiga Caafimaadka Harvard
Lamapal Basin Asthmaatiga ah ee Horumarinta iyo Dib u Dhiska Qalabka Nuromuscular
Kala soocista, Isbeddelka, iyo Dhimashada Unugyada Keli ah ee Xilliga Kobaca Nuuraanta
William A. Harris, Ph.D., Jaamacadda California, San Diego
Tilmaamaha Qaan-celinta iyo Hawlgalinta Hawlgabka ee Horumarinta
Robert P. Elde, Ph.D., Jaamacadda Minnesota Medical School
Daraasooyinka Immunohistochemical ee Limbic, Forward, iyo Hypothalmic Pathways Peptidergic
Yuh-Nung Jan, Ph.D., Dugsiga Caafimaadka Harvard
Cilmi-baarista ku-oolka ah ee Isticmaalidda Ganglia oo ah qaababka qaababka
Xaawa Marder, Ph.D., Jaamacadda Brandeis
Nidaamka Neurotransmitter ee Noocyada Korontada ku xiran Nidaamka Nidaamka
James A. Nathanson, MD, Ph.D., Yale Jaamacadda Daawada
Nidaamyada Hormoon Qalabka Dib-u-habeenta ee Nidaamka Xeerka Dhiigga Dhiigga Dhiigga iyo Xajmiga Dheecaannada Dareemaha ee Cerebrospinal
Louis F. Reichardt, Ph.D., Jaamacadda California, San Francisco
Baarista Hiddaha ee Hawlaha Dareemaha ee Dhaqanka
Doorka Qalitaanka Cholinergic ee Barashada iyo Xasuusta
Charles A. Marotta, MD, Ph.D., Dugsiga Caafimaadka Harvard
Xakamaynta Sinnaanta Tubulin ee Sameeynta Horumarinta
Urs S. Rutishauser, Ph.D., Jaamacadda Rockefeller
Kaalinta Qalabka Cell-Cell Adhesion ee Horumarinta Unugyada Neural
Kontoroolka Xoolaha ee Quudinta ee Navanax